TELOVOLANA FAHAROA : Tsy maintsy natomboka omaly na maro aza ireo sekoly simba
Sehatra iray voatohintohina hatrany ny sehatry ny fampianarana rehefa misy ny rivodoza mandalo. 12 janvier 2018
Ankoatra ny fampiatoana vokatry ny andro ratsy mantsy, dia mbola tsy afaka manohy ny fianarany ihany koa ireo mpianatra noho ny fahapotehan’ny sekoly. Eo ihany koa ny fanapahan-kevitra raisin’ny tompon’andraikitra samihafa amin’ny fametrahana ireo traboina eny anivon’ny sekoly. Mahakasika izay indrindra dia fantatra izao fa miisa 263 ireo efitranom-pampianarana simba tanteraka nandritra ny fandalovan’ny rivodoza Ava, araka ny antontan’isa navoakan’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena. Mahatratra hatrany amin’ny 77 kosa ireo efitrano fianarana izay ampiasaina handraisana ireo traboina.
Mbola misy ihany koa anefa ireo efitrano fianarana simba amin’ny ampahany na ihany koa simba tafo. Araka ny antontan’isa nomen’ny ministera hatrany dia fari-piadidiam-pampianarana miisa 77 no mitondra takaitra amin’izao fotoana izao vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Ava. Izany hoe, mpianatra maherin’ny 34 000, raha atambatra no tsy afaka hiverina an-tsekoly vokatry ny rivodoza. Etsy ankilany anefa dia nanamafy ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena fa nanomboka omaly alakamisy 11 janoary dia tokony niverina avokoa ny fampianarana manerana ny nosy. Efa nisy araka izany ny fepetra noraisina hametrahana efitrano fianarana vonjimaika.
Tsy miova ny datim-panadinana ofisialy
Ho an’ireo any amin’ny faritra sasany dia misy fifampiraharahana amin’ny tompon’andraiki-panjakana any an-toerana mba hahafahan’ireo ankizy miverina mianatra. Anisan’izany ny tokony hijerena toerana hafa afaka hampiantranoana ireo traboina. Etsy ankilany dia ireo sekoly tsirairay no mametraka fandaminana amin’ny fanatanterahana ny fanenjehana ny fandaharam- pianarana. Tsy mbola nisy fiovana ihany koa hatreto ny tetiandrom-pampianarana sy ny datin’ireo fanadinana ofisialy rehetra, araka ny voalaza hatrany.
Andrasana araka izany izay mety ho fivoaran’ity tetiandrom-pampianarana ity. Tsara tsiahivina mantsy fa efa nahitana fihemorana be ny fidiran’ny mpianatra tamin’ity taom-pianarana ity vokatry ny valanaretina nisy teto an-toerana. Mbola voaelingelina ihany koa ny fampianarana vokatry ny rivodoza farany teo. Ireo antony izay isany anindrahindran’ny ministera voakasika ny amin’ny tokony hidirana amin’ilay drafi-panabeazana vaovao na ny Pse.